CDMA အထိုင်ဖုန်းနဲ့ internet ချိတ်ချင်တယ် — MYSTERY ZILLION
CDMA အထိုင်ဖုန်းနဲ့ internet ချိတ်ချင်တယ်
November 2008 edited December 2008 in Help Desk
ကျနော်က CDMA အထိုင်ဖုန်းနဲ့ internet ချိတ်ချင်တယ် laptop နဲ့ပေါ့ ဗျာ
com port ကမရှိလို့ ကျနော်ကွပျုတာ ဆိုင်မှာ USB to COM port cable ကို သွား၀ယ်လာတယ်
Device Manager ထဲ မှာ ကြည့်တော့ com port က com8 တဲ့
usb နေရာကြည့်တော့ usb serial converter တဲ့
ကျနော် CDMA software နဲ့ ချိတ်မယ်လုပ်တော့ com port fail or not found တဲ့ ဗျာ
ကျနော်ကို လာပြီးခေါင်းစားနေတယ် ဗျာ ကူညီကြပါအုန်း
MZ မှာ လူတော်တွေအများကြီးပါ ကူညီပါအုန်းနော်
ကိုဒိန်းဂျားစိုင်း မေးတာလေးမဖြေပေးကြခင်မှာ ကျွန်တော် တစ်ခုလောက်လေးထပ်မေးပါရစေ။ ကျွန်တော်က အင်တာနက်အကြောင်းကို အခုမှစတင်လေ့လာနေသူတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်မရှင်း တာလေးတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော် က ဖုန်းကနေအင်တာနက်ယူသုံးမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ အိုင်ပီနံပါတ်တွေ ကိုဘယ်လိုထည့်ေးပရပါမလည်းမသိဘူးနော် အမ်ဇက်က အကို အစ်မတွေ ခင်မျာ ကျွန်တော် မေးတာလေးကို လည်းဖြေပေးကြပါဦးခင်မျာ။အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်လျှက်ပါ........
nyochawlay wrote: »
အဲတာတော့ ကိုသိတယ် ဟီး ဖုန်းကနေ ချိတ်တာတော့ ကြိုးနဲ့ပေါ့ ဟီး
ဖုန်းလှိုင်းကို ပြောတာလား ???
GSM ကို ပြောတာလား ???
CDMA ကိုပြောတာလား ???
ကျနော် သိသလောက်ပြောမယ်ဗျာ ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်သုံးနည်းပေါ့
ဖုန်းတွေမှာ SIM cards ရှိတယ်လေ သူနံပတ်နဲ့သူရှိပြီးသားဘဲ နံပတ်တွေက ip တွေလိုပါဘဲ sim နဲ့တော့ အချိန်နဲ့ ပိုက်ဆံပေးရတယ်
မေးတာကနည်းနည်း ဖြေတာက အများကြီးဖြစ်နေမှာဆိုးလို့ မေးခွန်းကိုကြည့်ပြီး
ကျနော်မေးခွန်းတော့ ဖြေမဲ့လူမရှိလောက်တော့ပါဘူးဗျ:106::39: လွမ်းစရာဘဲ
ကျေးဇူးပါပဲ ကို ဒိန်းဂျားစိုင်းရေ ကျွန်တော်က ဖုန်းဆိုရင် စလောင်းဖုံးလောက်ပဲသိတာဗျ အခုလိုရှင်းပြပေးတဲ့ အတွက်လည်း အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာ။ အညာသားလေး....
ခက်ပါတယ် ဒီရွာကလူတွေနဲ့တော့ ဟီး:d
ကျွန်တော် သိသလောက်ပြန်ပြောပြတာပါ . . ဟုတ်ချင်မှလဲ ဟုတ်မှာပါ . . ကျွန်တော် စမ်းတုန်းကတော့ သေချာမရလိုက်ဘူး . . . CDMA(cell) ဖုန်းနဲ့ internet ချိတ်လို့ ရနိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် . . . phone line ထက်စာရင် . . handset နဲ့ ဆိုင်တယ်လိို့ ထင်ပါတယ် . . ကျွန်တော် စမ်းတုန်းကတော့ CDMA နဲ့ မဟုတ်ဘူးဗျ . . GSM နဲ့ စမ်းတာ . . handset နဲ့ တွဲပါတဲ့ software တွေမှာ moble ( handset ) modem software ပါလာတက်ပါတယ် . . တကယ်တော့ handset ရဲ့ modem driver ပါ . . အဲဒါကို install လုပ်ပီးရင်တော့ handset နဲ့တွဲသုံးရမယ့် cable လိုပါတယ် . . များသောအားဖြစ် cable တွေကို handset ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေက ယူထားတက်ပါတယ် . . အဲဒီ cable နဲ့ driver သာရှိရင် လုပ်လို့ရနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ် . . ပြီးရင်တော့ access kit configure လုပ်တဲ့အတိုင်း လုပ်လို့ရပါပြီး
ကျွန်တော် စမ်းတုန်းကတော့ အဲဒီအထိ OK တဲ့ဗျ . . internet ကို connect လုပ်တော့မှာ username နဲ့ password မှားတယ်ဆိုလို့ ထပ်မစမ်းဖြစ်တော့တာပါ . . .